Taxanaha HPC Automatic Haydarooliga Cup Samaynta Machine - Shiinaha Guangdong Jinxin Makiinado
Mode / dhimaya HPC-660 HPC-700 HPC-720 HPC-750
wax Available PP, PE, PET, HIPS, GPPS
Aagga la aasaasay (mm) 650 × 320 700 × 350 720 × 450 750 × 500
Qoto-dhafka ah (mm) 120/180 120/180 120/180 120/180
Speed-dhafka ah (wareegyada / min) 20-35 20-35 20-35 20-35
Dhumucdiisuna (mm) 0.3-2.0 0.3-2.0 0.3-2.0 0.3-2.0
Power of mashiinka oo dhan (kw) ≤45 ≤50 ≤55 ≤65
Ture Air (MPA) 0.6-0.8 0.6-0.8 0.6-0.8 0.6-0.8
Ture Water (m3 / h) ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5 ≤0.6
Aragti (mm) 5500x2300x2400 5800x2500x2600 6200x2800x2600 7200x2800x2600
Thermoforming xirxiraan weel sida koob, sanduuqyada iyo maddiibadihii. Sida koob caano, koob jelly, koob jalaato, koob hal mar ah, fijaan nuudhalka deg dega ah, sanduuqyo cunto si dhakhso ah, sanduuqyo cunto iyo wixii la mid ah.
1. mashiinka ayaa ansixiyey nidaamka cadaadis Haydarooliga in ay soo saaraan alaabta, orodka deggan, buuq yar, awood quful caaryada wanaagsan.
2. korontada, gaaska, isdhexgalka cadaadis Haydarooliga, gacanta PLC, sax sare diinta ka soo noqnoqoshada.
3. Gebi si toos ah iyo si degdeg ah xawaaraha wax soo saarka. By rakibidda wasakhahaasi kala duwan si loo soo saaro waxyaabaha kala duwan.
4. edaab noocyada caanka ah ee ku xir-korontada iyo pneumatic, orodka deggan, oo tayo leh oo lagu kalsoonaan karo iyo cimri dheer laga keeno.
5. Mashiinka oo dhan waa is haysta, hal caaryada leeyahay dhammaan hawlaha, sida adiga oo riixaya siintiisa, la xirrira, jarida, qaboojinta iyo dhammeeyey wax soo saarka is qarxiyaan. habka gaaban, tayo sare leh ee alaabta dhammeeyey oo gaarsiisan yahay heerka nadaafada qaranka.
6. mashiinka waa taam u soo saara PP, PE, PET, HIPS, GPPS iyo alaabooyinka kale ee caaga ah, sida koob, sanduuqa, iyo maddiibad iyo wixii la mid ah. Tusaale ahaan, koob oo caano, koob jelly, ice cream koob, hal-off koob, iyo maddiibad nuudhalka deg dega ah, sanduuqa cuntada si dhakhso ah, sanduuqa cuntada iyo wixii la mid ah.
: Previous HPC-660 Automatic Jelly Cup Jarida iyo Sargaal Machine
Next: Machine Making RCX Taxanaha Automatic Cam Cup